Isifo esinjalo esikhumba sithinta abesifazane abangaba ngu-90%, kunzima ukuphatha futhi akunakwenzeka ukufihla ngaphansi kwe-tonal cream noma i-powder. Thola ukuthi unayo nokuthi ungayivimbela kanjani i-couperose.
I-asterisk encane ebomvu ebusweni noma entanyeni, ama-cyanotic amathanga emaphikweni ekhaleni, igridi yonke yemithambo yegazi - konke kuperoz. Ungaphansi kokubili abesifazane nabesilisa, angabonakala esemncane futhi ekhulile. Ama-creams amathani, ama-penking ahlukahlukene, i-powder - konke lokhu akakwazi ukufihla iphutha elibi. Futhi okwamanje, eyodwa kuphela ibonakala i-asterisk ikwazi ukuqala ukusabela kwamakhansela ngesikhathi esifushane, futhi manje ubuso bonke buhlanganiswe non-estictic
umnsundu obomvu. Kungani i-couperose ivela?
Eqinisweni, zonke lezi asterisks nezinkanyezi zinezitsha zegazi ezandiswe kancane, ezithi, ngenxa yobuthakathaka bezindonga, azikwazi ukuvumelanisa nesayizi yazo yangempela. I-Kuperoz yenzeka ngenxa yokuhamba kwegazi okwephukile esikhumbeni, ngenxa yalokhu kuphazamiseka kokuphuma kwegazi elimnyama, eliqhubekela phambili ema-capillaries, okuholela ekuthungeni nasekuncipheni kwawo, okuholela ekugqibeni kwe-couperose. Ukuvimbela i-couperose, udinga ukubuyisela izindonga zemikhumbi.
Kungani ukusakaza kwegazi kuphazamiseka ezitsheni? Lokhu kulandelwa izici eziningana, ukwazi ukuthi yini ekwazi ukuvimbela i-couperose:
• Ukuhlelwa kwesimo se-Hereditary: kumanani amaningi, i-couperose yinkinga yomndeni;
• Isikhumba esibucayi;
• Ukushisa kwelanga ngokweqile noma ukuhlukunyezwa kwe-solarium kunomthelela ekulimaleni ezindongeni zamasongo kanye nokunciphisa okuqhubekayo kwezitsha ezincane emzimbeni nasebusweni;
• Ukushintshashintsha kwama-hormonal noma izidakamizwa (ukukhulelwa, ukuphuma esikhathini, njll);
• Ukuphuza utshwala njalo (ikakhulukazi iwayini elibomvu);
• Ukubhema (i-nicotine iyabulala emzimbeni wevithamini C, okudingekayo esimweni esivamile sezindonga zemithambo yegazi);
• Izinguquko ezibukhali kakhulu zokushisa (sebenzisa ukushisa okuphakeme noma okuphansi);
• Izifo zesimiso senhliziyo (ikakhulukazi izifo ezingapheliyo emithanjeni);
• Umsebenzi omzimba ophezulu kakhulu.
Kufanele ukwenze kanjani nge-couperose?
Uma unezibonakaliso zokuqala ze-couperose, kufanele wazi ukuthi kufanele unakekele kahle kanjani isikhumba sakho. Manje unqatshelwe ekusebenzeni ngokomzimba okwedlulele, njengoba kuholela ekuwohlokeni okubukhali kwesimo, ngenkathi kubangele ukuqhuma kwegazi ekhanda, okuholela ekusenikeni kwe-couperose.
Unakekele isikhumba sakho, esitholakale ku-couperose, ngokufanele. Manje khetha izimonyo zesikhumba esibucayi, futhi qiniseka ukuthi ungabandakanyi ekusebenziseni kwansuku zonke izinto ezinobudlova njengama-peelings, ama-scrubs, ama-lotions ane-alcohol anama-tonics. Ungasebenzisi ama-masks okushisa nokushisa. Ungazigezi ngamanzi ashisa kakhulu noma abandayo kakhulu, izinga lokushisa eliphakeme kakhulu lingu-22-23 degrees.
Amasks ebusweni kusuka ku-apula
Vikela ubuso bakho kusuka omile futhi uphendule
Ukuvikelwa kathathu kwesikhumba: Bobbi Brown Masks Ubuso - 2016
Indlela yokunakekela isikhumba nge-acne
Abadlali be-series of Returns Mukhtar
U-Ksenia Borodina wanikeza umyeni wakhe ithoyizi elibiza kakhulu, isithombe
Izici eziyinhloko zokusikwa kwama-Chinese
Ukubopha ngezandla zakho
Iklabishi i-recipe i-recipe ka-grandmother's recipe
Ingabe kuyasiza ukuba nobulili nokuthi kaningi kangakanani?
Ama-mushroom e-salted e-salted